Boqolaal qof oo lagu qabtay howlgal ka dhacay 3 ka mid ah degmooyinka Banaadir * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated May 3, 2015
Mareeg.com: Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxey ku soo qabteen tiro dad ah oo looga shakisanyahay inay ka tirsanyihiin Alshabaab.
Howlgalkan ayaa intiisa badan laga fuliyey degmooyinka Warta Nabadda, Howlwadaag iyo Hodan, kaasi oo bilowday 2-dii habeennimo.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha, Maxamed Yuusuf Cismaan oo howlgalka kaddib la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in u jeedka howlgalka uu ahaa sidii loo ugaarsan lahaa xubnaha ka tirsan Al-shabaab ee ku dhuumaaleysanaya qaar ka mid ah xaafada degmooyinka Gobolka Banaadir.
“Howlgalkan waxaa iska kaashanaya, ciidamada Booliska, Nabadsugidda, Militeriga iyo kuwa AMISOM, waa howlgal loo dhanyahay, waxaana uu yahay mid lagu xaqiijinayo Nabadgelyada caasimadda, baaritaannada intii uu socday 473 qof ayaa lagu soo qabtay, markii dadka lakala saaaray, waxaa soo hartay 6 qof oo looga shakisanyahay inay ka tirsanyihiin kooxda Alshabaab ciidamada ayaana gacanta ku haya” ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Afhayeenka ayaa xusay in howlgallada ceynkaan oo kale ah ay yihiin kuwa la joogteyn doono, isagoo shacabka ka codsaday inay muujiyaan dulqaad inta uu howlgalka socda, ayna la shaqeeyaan ciidamada amniga.
“Waxaan shacabka ka codsaneynaa inay dulqaataan inta uu socda howlgallada lagu xoojinayo amniga, runtii shacabka ciidanka way la shaqeeyaan, waxaan markale ka rabnaa in dhankooda ay xoojiyaan la shaqeynta ciidamada” ayuu hadalkiisa ku daray Afhayeenka Wasaaradda Amniga gudaha.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa dad badan ka qaqabta xaafadaha caasimadda Soomaaliya, taasina weli ma keenin amaan soo hagaagay.
Yaa ku guuleystay feerkii la sugayey tobanaan sano ee ka dhacay Mareykanka? (Sawirro)